Download Air Hockey Ultimate | Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » Air ကိုဟော်ကီ Ultimate
ချန်ပီယံ mode နှင့်အံ့သြဖွယ် features တွေနှင့်အတူဤထိပ်တန်းအခမဲ့လေကြောင်းဟော်ကီဂိမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိ!
GAME MODES- CPU CPU - ကွန်ပြူတာ၏4ဆက်တင်များနှင့်တိုက်ထုတ်ခြင်း (သို့) စိတ်ကြိုက် AI ချိန်ညှိခြင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
- VS HUMAN: သင်၏သူငယ်ချင်းကိုတိုက်ခိုက်သည့်စက်ဝိုင်းဟော်ကီပြိုင်ပွဲနှင့်တူသည်
- ချန်ပီယံ - 4-10 ကစားသမားများ၊ AI သို့မဟုတ်လူသား၊ အဆုံးတွင်ဆုနှင့်အတူအပြည့်အဝချန်ပီယံ
- အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်များ၊ Android 2.3 နှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်
- REALISTIC PHYSICS အပေါ် အခြေခံ၍ ချောချောမွေ့မွေ့တုံ့ပြန်မှုရှိသည့်ဂိမ်း
- 12 TABLE ခေါင်းစဉ်များ (ဘောလုံး၊ ရေခဲပြင်ဟော်ကီ၊ ဘောလုံး၊ ပြိုင်ပွဲ၊ ဂန္တ ၀ င်ခရစ်စမတ်၊ ချစ်သူများနေ့၊ ချစ်သူများနေ့၊ သတ္တု၊ ဒင်းနစ်၊ retro၊ တင်းနစ်၊ doodle) ဂရပ်ဖစ်သာမက၊
- သင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုချမှတ်သောအခါအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ မီးပွားများ၊ ပေါက်ကွဲမှုများနှင့်မီးများတောက်ပနေသည်
- လုံးဝအခမဲ့၊ ပြည့်စုံစွာကစားနိုင်သည့်ဂိမ်း
- နှစ်မြှုပ်ခြင်း Tactile Effects နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်
- SD ကဒ်တွင်လည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်
Android တွင်ရရှိနိုင်သည့် Fat Bat စတူဒီယိုလီမိတက်၏ချစ်မြတ်နိုးရသောလေကြောင်းဟော်ကီဂိမ်း! အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်၊ ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ သင်ယူရလွယ်ကူသော၊ ဂိမ်းကစားရန်ကျွမ်းကျင်ပြီးသေးငယ်သည့်တပ်ဆင်ထားသည့်အရွယ်အစားကြောင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောအရာများအနက်မှတစ်ခုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသော AI ပြိုင်ဘက်များနှင့်ကစားနိုင်သည်၊ သင်၏စွမ်းရည်နှင့်ကိုက်ညီသောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သင်၏လုပ်နိုင်စွမ်းပိုကောင်းလာသည်နှင့်အမျှသင်လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ပိုကောင်းလာသည်နှင့်အမျှသင်၏တီထွင်မှုတစ်ခုတည်းပေါ်တွင်သင်၏သူငယ်ချင်းနှင့်ဆော့ကစားခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုခက်ခဲလာအောင်လုပ်ရန်၊ အကောင်းဆုံး။
အပိုဆောင်း Championship Mode တွင် 4၊ 6, 8 သို့မဟုတ် 10 ပြိုင်ဘက်များ၊ လူသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဖြင့်သင်ကစားနိုင်သည်။ လက်ရှိဗားရှင်းမှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားရုံသာမကကွဲပြားခြားနားစွာကစားနိုင်သည့် 12 အရေခွံများပါရှိသည်။ သတ္တုဟော်ကီ၊ အစစ်အမှန်ဟော်ကီ၊ ဂန္ထဝင်လေကြောင်းဟော်ကီ၊ ဘောလုံး (ဥရောပဘောလုံး)၊ အမေရိကန်ဘောလုံး၊ နီယွန် retro အလင်း၊ doodle၊ တင်းနစ်၊ ခရစ်စမတ်၊ ချစ်သူများနေ့၊ မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူအပျေါမှာတိုးချဲ့လိမ့်မည်။
-2အသစ်သောအခင်းအကျင်းများ - တင်းနစ်နှင့် doodle
- အသေးအဖှဲ bugfixes
9.38 ကို MB
နိုဝင်ဘာ 14, 2015
အဆီ Bat Studio